November 17, 2020 - Padaethar
မိန်းကလေးတွေ ဘာကြိုက်….???( မိန်းကလေးများ မဖတ်ရ )
မိန်းကလေးတွေ ဘာကြိုက်???(မိန်းကလေးများ မဖတ်ရ) အင်း….ပြောရရင်တော့ အများသားဗျ။ လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုး ဆိုတော့ကာ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း တော့ မှန်ချင်မှ မှန်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် မိန်းကလေးအများစု နှစ်သက်တတ်တာလေးတွေကတော့ တူလေ့ရှိတယ်ခမျ။ သူတို့ သဘောကျတတ်တာလေးတွေ၊ မြတ်နိုးတတ်တာလေးတွေ၊ ချစ်တတ်တာလေးတွေ က ဆန်းတာလေးတွေရှိသလို ချစ်ဖို့ကောင်းတာလေးတွေပါရှိရဲ့။ အသက်အရွယ်အရ ပြောင်းလဲသွားတာလေးတွေလဲ ရှိလိုက်သေးတာဗျ။ ကျနော် တွေ့ကြုံဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘဝတစ်လျှောက် ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အကြိုက်လေးတွေကို မျှဝေပေးပါရစေ။ သူတို့နဲ့ တွဲနေသူကို သူတို့ ကြိုက်တတ်တာလေးတွေ ၊ဖြစ်စေချင်တာလေးတွေက၊ ခိုက်တတ်တာလေးတွေ က ဘာတွေများဖြစ်မလဲ? နားထောင်ပါ….. နည်းနည်းပြော ၊ များများနားထောင်ဗျို့။ သူတို့လေးတွေမှာက အမြဲတမ်း ပြောပြစရာလေးတွေက ရှိနေတတ်တာကလား။ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲထဲက စိတ်ပုတ်မအကြောင်းကအစ၊သူတို့ရုံးက Admin အပေါက်ဆိုးတာကအလယ်…. ဆံပင်နဲနဲလေး … Read more
( ၇ )ရက်သားသမီးများအတွက် နေ့နာမ်အလိုက် အရမ်းမှန်တဲ့ အချစ်ဗေဒင်
17.11.2020 မှ 23.11.2020ထိ (၇)ရက်သားသမီများအတွက် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း
17.11.2020 မှ 23.11.2020ထိ (၇)ရက်သားသမီများအတွက် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း ဗေဒင်ရွာ ပရိတ်သတ်ကြီးတွေအတွက် ဆရာအောင်ချစ်မင်းရဲ့ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် တနင်္ဂနွေ…. သင်၏အလုပ်အကိုင်မှာကောင်းနေပါသည်။ဘယ်သူအကူညီမှမပါပဲအလုပ်တွင်အောင်မြင်မှု့တွေရရှိမည်။ဒီအချိန်သင့်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအချိန်ရောက်နေပါပြီ….. သင်လုပ်ချင်လုပ်ပါအောင်မြင်မှု့တွေရရှိမည်။ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကရာထူးတိုးတတ်မည်။အလုပ်နေရာကောင်းတွေလည်းရရှိပါလိမ့်မည်။ယခုအပတ်တွင်းလုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါကကောင်းပါသည်။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ငွေကြေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။လာဘ်လာဘတွေလည်းပေါးများသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။သင်၏ကျန်းမာရေးကံမှာလည်းကောင်းနေပါသည်။ပူပင်စရာမရှိပါ။ ပညာရေးကံမှာကောင်းပါသည်။သင့်ကြိုးစားထားတာတွေအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။သင်၏အချစ်ရေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။တည်တံ့ခိုင်မြဲသောအချစ်ရေးဖြစ်ပါသည်။သင်၏ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကိစ္စမှာကောင်းနေပါသည်။ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောခရီးစဉ်ဖြစ်တတ်ပါသည်။သင်၏ကံကောင်းသောအရောင်မှာအဝါရောင်ဖြစ်သည်။ယခုအပတ်အတွက်အကောင်းဆုံးယတြာကိုကျွန်ုပ်မှညွှန်ကြားပေးလိုက်သည်။ ဂန္ဓမာပန်း(၅)ပွင့်အိမ်ဘုရားလှူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။သင်၏အခက်အခဲအားလုံးတို့သည်ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မှယုံကြည်သည်။ တနင်္လာ….. အလုပ်အကိုင်မှာကောင်းနေပါသည်။အလုပ်အတွင်ပူပင်စရာမလိုလောက်အောင်ကောင်းနေပါသည်။အလုပ်အတွက်အဆက်သွယ်ကောင်းတွေလည်းရရှိပါလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းတွင်လည်းကိုယ့်အတွက်ကူညီမည့်သူတွေလည်းပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကအလုပ်တွင်ရာထူးတိုးတက်မည်။အလုပ်တွင်လည်းနံမည်ကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မည်။ ယခုအပတ်တွင်းလုပ်ငန်းသစ်များစတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါကကောင်းပါသည်။အမြတ်စွန်းများသောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။သင်၏ငွေကြေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။လာဘ်လည်းအလွန်ရွှင်နေပါလိမ့်မည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။ယခုအပတ်အတွင်းသင်သည်ပညာရေးကောင်းနေပါသည်။သင်၏အချစ်ရေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။ပျော်ရွှင်မှု့တွေရရှိသောအချစ်ရေးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ယခုအပတ်အတွင်းပြည်တွင်းပြည်ပခရီးပေါ်လျှင်ကောင်းပါသည်။ပျော်ရွှင်ရသောခရီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။သင်၏ကံကောင်းသောအရောင်မှာအနက်ရောင်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအပတ်အတွက်အကောင်းဆုံးယတြာကိုကျွန်ုပ်မှညွှန်ကြားပေးလိုက်သည်။ဒန်းညွန့်(၁၇)ညွန့်အိမ်ဘုရားလှူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။သင်၏အခက်အခဲအားလုံးတို့သည်ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မှယုံကြည်သည်။ အင်္ဂါ….. ဒီအချိန်မှာသင့်အလုပ်အကိုင်မှာအနည်းငယ်တော့ညံ့နေပါသည်။အလုပ်တွင်ရန်လည်းအနည်းငယ်များနေတတ်ပါသည်။သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေအရင်းကြီးတွေကလည်းသင့်ကိုရန်ပြုတတ်ပါသည်။ အလုပ်မှာလည်းမတော်မတရာအပြောခံရတတ်ပါသည်။ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကအလုပ်တွင်သူတပါးကိစ္စအနည်းငယ်ပြသနာလေးတွေဖြေရှင်ရတတ်ပါသည်။သူတပါးကိစ္စကိုယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်သွားတတ်ပါသည်။ ယခုအချိန်မှာသင့်ကံတရားအနည်းငယ်ညံ့နေတယ်လို့ကျွန်ုပ်နေဖြင့်ပြောချင်ပါသည်။ယခုအပတ်တွင်လုပ်ငန်းသစ်များစတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါကလုံးဝမလုပ်ပါနှင့်ညံ့နေပါသည်။သင်၏ငွေကြေးကံမှာတော့ကောင်းနေပါသည်။ သူတပါးကိုတော့ငွေလုံးဝမချေးပါနှင့်လုံးဝပြန်မရတတ်ပါ။သင်၏ကျန်းမာရေးကံမှာဝမ်းဗိုက်ဥပါဒ်ပေးတတ်ပါသည်။ပညာရေးကံမှာလည်းကောင်းနေပါသည်။ကျက်စာဘာသာရပ်ကိုတော့ဂရုစိုက်ရပါလိမ့်မည်။ သင်၏အချစ်ရေးကံမှာလည်းကောင်းနေပါသည်။ချစ်သူကသဝန်တိုစိတ်ကြောင့်တော့အနည်းငယ်စကားများရတတ်ပါသည်။သင်၏ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကိစ္စပ်ါလျှင်လည်းကောင်းပါသည်။တောင်အရပ်ကိုတော့ရှောင်ပါ။ ကံကောင်းသောအရောင်မှာအညိုရောင်ဖြစ်သည်။ယခုအပတ်တွက်အကောင်းဆုံးယတြာကိုကျွန်ုပ်မှညွှန်ကြားပေးလိုက်သည်။ ငွေထီး(၉)လက်အိမ်ဘုရားတွင်လှူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။သင်၏အခက်အခဲအားလုံးတို့သည်ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မှယုံကြည်သည်။ ဗုဒ္ဓဟူး…. သင်၏အလုပ်အကိုင်မှာကောင်းနေပါသည်။သင့်လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်မှု့တွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ဒီအချိန်သင့်အတွက်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်မှလည်းသင့်အတွက်အောင်မြင်မှု့တွေရရှိပါလိမ့်မည်။ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကအလုပ်တွင်ရာထူးတိုးပြီးနေရာပြောင်းရွှေ့ရတတပါသည်။ အဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကသင့်အတွက်ကောင်းသောအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်တတ်ပါသည်။ယခုအပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါကကောင်းပါသည်။သင့်အတွက်အကျိုးပြုသောအလုပ်အကိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ငွေကြေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။ငွေများများဝင်ပါလိမ့်မည်။သင်၏ကျန်းမာရေးကံမှာကောင်းပါသည်။စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ပညာရေးကံမှာလည်းကောင်းပါသည်။ သင့်အတွက်အောင်မြင်မှု့တွေရရှိပါလိမ့်မည်။သင်၏အချစ်ရေးကံမှာလည်းကောင်းပါ။ပျော်ရွှင်သောအချစ်ရေးကောင်းပါသည်။သင်၏ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကိစ္စမှာတော့ကောင်းပါသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောခရီးစဉ်ဖြစ်တတ်ပါသည်။သင်၏ကံကောင်းသောအရောင်မှာမိုးပြာရောင်ဖြစ်သည်။ ယခုအပတ်တွက်အကောင်းဆုံးယတြာကိုကျွန်ုပ်မှညွှန်ကြားပေးလိုက်သည်။သာသနာ့အလံ(၁၉)ချောင်းအိမ်ဘုရား လှူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။ ကြာသပတေး… သင်၏အလုပ်အကိုင်မှာကောင်းနေပါသည်။မဖြစ်တော့ဘူးလို့ထင်ထားသောအလုပ်တွေပြန်လည်လုပ်ဖြစ်တတ်ပါသည်။ရပ်ဝေးကအဆက်သွယ်ကောင်းတွေလည်းရရှိမည်။ အဲ့ဒီအဆက်သွယ်တွေသင့်အတွက်ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။စီးပွားတတ်ခြင်းလည်းကြုံတွေ့ရမည်။ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကအလုပ်အကိုင်တွေကောင်းနေပါသည်။ သင့်ကိုမကောင်းပြောတဲ့သူတွေသင့်ကိုချီးမွမ်းပါလိမ့်မည်။ယခုအပတ်တွင်းလုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါကကောာင်းပါသည်။သင့်တော်သောလုပ်ငန်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏ငွေကြေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။လာဘ်လည်းအလွန်ရွှင်နေပါလိမ့်မည်။သင်၏ကျန်းမာရေးကံမှာလည်းကောင်းနေပါသည်။ပူပင်စရာမရှိပါ။ပညာရေးကံမှာလည်းကောင်းနေပါသည်။ အောင်မြင်မှု့တွေလည်းရရှိပါလိမ့်မည်။သင်၏အချစ်ရေးကံမှာကောင်းပါသည်။ချစ်သူထံမှလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းရရှိပါလိမ့်မည်။သင်၏ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကိစ္စမှာလည်းကောင်းပါသည်။ အနောက်တောင်အရပ်ကိုတော့ရှောင်ပါ။သင်၏ကံကောင်းသောအရောင်မှာအစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်။ယခုအပတ်တွက်အကောင်းဆုံးယတြာကိုကျွန်ုပ်မှညွှန်ကြားပေးလိုက်သည်။ ကံကော်(၁၁)ညွန့်အိမ်ဘုရား လှူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။သင်၏အခက်အခဲအားလုံးတို့သည်ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မှယုံကြည်သည်။ သောကြာ….. သင်၏အလုပ်အကိုင်မှာကောင်းနေပါသည်။အလုပ်မှာလည်းအေးချမ်းမှု့တွေရောက်ရှိလာပါလိမ့်မည်။ကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေလည်းပေါ်မည်။စိတ်ချမ်းသာဆရာတွေလည်းရရှိပါလိမ့်မည်။ စီးပွါးရေးလည်းကောင်းလာပါလိမ့်မည်။ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကအလုပ်မှာသတင်းကောင်းတွေကြားရတတ်ပါသည်။သင်တန်းတွေလည်းတက်ဖြစ်တတ်ပါသည်။ကောင်းပါသည်။ ယခုအပတ်တွင်းလုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါကကောင်းပါသည်။အလွန်အကျိုးပေးသောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ငွေကြေးကံမှာတော့ကောင်းနေပါသည်။ငွေအလုံးအရင်းဝင်မည့်ကိန်းလည်းရှိပါသည်။ … Read more
သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ ယောင်္ကျား လေးတွေကို မိန်းကလေးတွေ ဘာလို့ထားခဲ့ကြသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း (၄)ရပ်